पुन: प्राप्ति: उत्तम प्रोग्राम तपाईको कम्प्युटरबाट हटाइएको डाटा पुन: प्राप्ति गर्न ग्याजेट समाचार
ईडर एस्टेबान | | सामान्य, सफ्टवेयर
एउटा समस्या जुन हामीले अवसरमा सामना गरेका छौं त्यो हामीसँग छ गल्तीले कम्प्युटरबाट डाटा मेटाउँदै। कुनै पनि प्रकारको फाईल जुन हामीले हटाउनु हुँदैन, तर दुर्भाग्यवस मेटाइएको छ। यो त्यस्तो चीज हो जुन निश्चित रूपमा अवसरहरूमा भएको थियो। यदि हामीले त्रुटिको बारेमा द्रुत रूपमा पत्ता लगायौं भने, हामी सम्भवत: फाइल रद्दीटोकरीबाट पुन: प्राप्ति गर्नेछौं। तर यो सधैं सम्भव हुँदैन। त्यसोभए, हामीले रिकभरीट जस्ता प्रोग्राममा जानुपर्नेछ।
पुन: प्राप्ति नि: शुल्क उत्तम प्रोग्राम हो जुन हामीले हालसालै फेला पार्दछौं जब यो कम्प्युटरबाट मेटाइएको डाटा पुनः प्राप्त गर्न आउँछ। यदि हामी हेर्दै थियौं भने हामीले गलतीले हटाएको फाइल पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्, यो धेरै सम्भावना छ कि हामी यसलाई कम्प्युटरमा सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर प्राप्त गर्नेछौं।
1 के ढाँचाहरू रिकभरिट समर्थन गर्दछ?
2 कसरी पुन: प्राप्ति गर्दछ
3 रीसायकल बिनबाट मेटाइएको फाईलहरू पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्
4 पुन: प्राप्ति कसरी डाउनलोड गर्ने
के ढाँचाहरू रिकभरिट समर्थन गर्दछ?
हामीले रिकभरिटमा फेला पार्ने एक ठूलो फाइदाहरू यो हुन् सबै प्रकारका फाईलहरूको साथ काम गर्दछ। त्यसोभए फरक पर्दैन कि यदि तपाईंले आफ्नो कम्प्यूटरबाट फोटो वा अडियो फाइल मेटाउनु भयो। तपाईं तिनीहरूलाई फेला पार्न सक्षम हुनुहुनेछ र हामीसँग कुनै पनि समयमा पुन: प्राप्ति हुने सम्भावना हुनेछ। यसलाई के यसले बहुमुखी बनाउँछ। समर्थित ढाँचा निम्नलिखित छन्:
कागजातहरू: DOC / DOCX, XLS / XLSX, PPT / PPTX, PDF, CWK, HTML / HTM, INDD, EPS, आदि
अडियो: AIF / AIFF, M4A, MP3, WAV, WMA, MID / MIDI, OGG, AAC, आदि
ग्राफिक्स: JPG, TIFF / TIF, PNG, BMP, GIF, PS, CRW, CR2, NEF, ORF, RAF, SR2, MRW, DCR, WMF, DNG, ERF, RAW, आदि
भिडियो: AVI, MOV, MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, FLV, SWF, MPG, RM / RMVB, आदि।
ईमेल: PST, DBX, EMLX, आदि।
अन्य: ZIP, RAR, SIT, आदि।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, ती हुन् साधारण फाइलहरू जुन तपाईं कम्प्युटरमा काम गर्नुहुन्छ। त्यसो भए Wondershare - पुन: प्राप्ति यसले धेरै समस्याहरू बिना उनीहरूमा फेरि पहुँच गर्न सक्ने सम्भावना दिन्छ। यो व्यापक अनुकूलता यस कार्यक्रमको एक शक्ति हो। किनकि हामीसँग उनीहरू सबै पहुँच गर्न सक्दछौं।
कसरी पुन: प्राप्ति गर्दछ
पुन: प्राप्ति एक बनाउन को लागी खडा छ कम्प्युटरमा फाईलहरूको धेरै विस्तृत खोज। त्यसैले यो डाटा हटाउनका लागि विभिन्न स्थानहरूमा खोजीको लागि जिम्मेवार छ जुन हामी मेटाउछौं। यो त्यस्तो चीज हो जुन यसलाई यो फिल्डका अन्य कार्यक्रमहरू भन्दा टाढा सेट गर्दछ। धेरै प्रोग्रामले प्राय: एक वा दुई साइटहरू खोजी गर्दछ। त्यसैले यसको सफलता अधिक सीमित छ। तर यो कार्यक्रमले धेरै गहिरो खोजी प्रक्रिया गर्छ।
किनकि यसले हामीलाई सबै प्रकारका स्थितिका लागि समाधानहरू प्रदान गर्दछ। फाइलहरूबाट जुन हामीले रिसायकल बिनबाट गल्तीले मेटाएका छौं, फाइलहरूमा भाइरस, हराएको पार्टिसन, बाह्य उपकरणहरू, ढाँचा डिस्कको कारण डेटा हराउने वा पूर्ण प्रणाली रिकभरीमा मेटाइएको छ। यो कामले हामीलाई खोजिरहेको डाटा पुनःप्राप्त गर्न यो एकदमै सफल बनाउँदछ। त्यसकारण, यो बजार मा अन्य विकल्पहरु देखि अलग देखिन्छ।
पुन: प्राप्ति सबै प्रकारका भण्डारण ड्राइभहरूमा काम गर्दछ। HDD, SSD वा बाह्य ड्राइभबाट क्यामेरा मेमोरी कार्डहरू। हामीले गर्न सक्ने केवल चीज जब हामी यो प्रोग्राम प्रयोग गरेर डाटा रिकभर गर्न चाहन्छौं यसलाई हाम्रो विन्डोज कम्प्युटरमा खोल्न र खोजी सुरू गर्नु हो। यदि हामीलाई त्यो डाटाको अधिक वा थोरै स्थान थाहा छ भने, हामी त्यो खोजी थोरै बढी समायोजन गर्न सक्छौं, ताकि यो एक विशेष स्थानमा केन्द्रित हुन्छ, यदि हामी चाहन्छौं भने। तर यो सबै स्थानहरू खोजी गर्न पनि सकिन्छ। हामीले भर्खर हामीले प्रयोग गर्न चाहेको रिकभरी विधि छान्नुपर्नेछ।
साथै, यो प्रोग्रामसँग भएको इन्टरफेस प्रयोग गर्न वास्तवमै सरल छ। ताकि यस क्षेत्रमा कम अनुभवको साथ प्रयोगकर्ताहरूले पनि धेरै समस्या बिना रिकभरिट प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछ। तपाईंले भर्खरै उल्लेख गरिएको रिकभरी विधि चयन गर्नुपर्नेछ। विभिन्न विकल्पहरू स्क्रीनमा देखाईन्छन्, ती सबै आइकनको साथ। त्यसोभए तपाईसँग कुनै समस्या छैन। त्यसो भए कार्यक्रम पुन: प्राप्ति प्रक्रिया शुरू हुनेछ। अन्त्यमा, तपाईं भन्नुभएका फाइलहरूको पूर्वावलोकन हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए तपाईले पुन: प्राप्ति गर्न चाहानु भएका ती व्यक्तिहरूको छनौट मात्र हो।
रीसायकल बिनबाट मेटाइएको फाईलहरू पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्
यदि तपाई के चाहानुहुन्छ र रद्दीटोकरीबाट हटाईएको फाईलहरु लाई विशिष्ट तरिकाले पुन: प्राप्त गर्नु हो भने, यो सम्भव पनि छ। किनभने यो पुन: प्राप्ति गर्न धेरै साधारण धन्यवाद हो। कार्यक्रमको सुरूमा हामीसँग हामीले खोजिरहेका रिकभरी विधिहरू चयन गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। कार्यक्रम मेटिएका फाईलहरू पुन: प्राप्ति गर्नुहोस् रद्दीटोकरीबाट, तर हटाईएको फाईलहरू पनि। त्यसैले कार्यक्रम यस सन्दर्भमा यसको खोजी सुरू गर्दछ।
त्यसो भएपछि, जब यो पूर्ण हुन्छ, स्क्रीनले प्रदर्शन गर्दछ फाईलहरूको पूर्वावलोकन जुन हामी पुनः प्राप्त गर्न सक्दछौं। यस अर्थमा तपाईले के गर्नु पर्छ तपाईले पुन: प्राप्ति गर्न चाहानुहुन्छ। यो साधारण तरिकामा, तपाईंसँग फाईलहरू तपाईंको कम्प्युटरमा फिर्ता छन्। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न केहि मिनेटहरू मात्र लाग्छ। त्यसोभए यस कम्प्युटरमा पुन: प्राप्ति गर्दा तपाईलाई यस समस्यामा समस्या हुने छैन, यदि तपाईं यो विशिष्ट प्रयोगको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने।
पुन: प्राप्ति कसरी डाउनलोड गर्ने
पुन: प्राप्ति विन्डोज र म्याक दुबैसँग मिल्दो कार्यक्रम हो। विन्डोज कम्प्युटर भएका प्रयोगकर्ताहरूको लागि यो अपरेटिंग प्रणालीको सबैभन्दा भर्खरको संस्करणहरूसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो हो, यो प्रयोग गर्न सकिन्छ विन्डोज १०, विन्डोज and र विन्डोज 10 कुनै समस्या बिना। जे होस् यसले पुरानो संस्करणहरूमा पनि काम गर्दछ, जस्तै भिस्टा वा एक्सपी। त्यसैले सबै प्रयोगकर्ताहरू जोसँग माइक्रोसफ्टको अपरेटिंग प्रणालीको साथ कम्प्युटर छ यसलाई प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछ।
यो म्याकोस प्रयोग गर्ने कम्प्युटरहरूसँग पनि उपयुक्त छ एक अपरेटिंग प्रणाली को रूप मा। रिकभरिटको संस्करण एप्पल कम्प्युटरहरू अनुरूप सिर्जना गरिएको छ। त्यसोभए प्रयोगकर्ताहरूलाई यसलाई साधारण तरीकाले प्रयोग गर्ने क्षमता पनि दिइन्छ। त्यसोभए यदि तपाइँ यस अर्थमा केही सफ्टवेयर खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यो पनि हुन सम्भव छ।
पुन: प्राप्ति वेबसाइटमा, जुन तपाईं यो लिंकमा भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँसँग प्रोग्रामको बारेमा सबै जानकारी छ। ताकि तपाइँलाई थाहा छ कि यदि यो त्यस्तो चीज हो जुन तपाइँको केसमा उपयोगी छ वा छैन। अरु के छ त, तपाईं यसलाई डाउनलोड गर्न अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छयस वेबसाइटमा दुबै संस्करणका लागि। सबै डाउनलोडमा यसको डाउनलोड नि: शुल्क छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » पुन: प्राप्ति नि: शुल्क हटाइएको डेटा पुन: प्राप्ति गर्न उत्तम सफ्टवेयर
कसरी सबै फेसबुक सन्देशहरू मेटाउने